Signal vs Telegram: maxay ku kala duwan yihiin? | Madasha Mobile
Cristian Garcia | 15/10/2021 09:56 | telegraam
Waxaa laga yaabaa inaad ka labalabeyso markaad dooraneyso app -ka fariimaha deg -degga ah iyo inaad go'aansatay inaad ka baxdo WhatsApp, markaa dagaalku wuxuu ku sii jiraa a Signal vs Telegram, asal ahaan. Taasi waa sababta aan halkan kuugu soo qaadan doonno maqaal kaas oo aan ku barbardhigi doonno labada arji ee fariimaha deg dega ah. Waxay u badan tahay, inaad ogaatay in WhatsApp ay leedahay dhibaatooyin badan oo asturnaanta taasina waa sababta aad u raadinayso beddel oo aad si fiican u fiicnaato haddii waxa aad raadineyso ay tahay, asturnaanta.
Labada adeeg ee farriimaha deg dega ah labaduba aad bay uga ammaan badan yihiin barnaamijka Mark Zuckerberg, oo ah milkiilaha Facebook oo isaguna leh WhatsApp. Xaqiiqdii, bishii Janaayo ee sannadkan waxaa lagu ogeysiiyay WhatsApp in dad badan, haddii aaney dhammaan, xogta isticmaaleyaasha lala wadaagay in illaa hadda si gaar ah loogu ilaalinayey shirkadda walaasheed, Facebook. Arrintan ayaa dhalisay dhaleecayn badan oo loo soo jeediyay shirkadda. Natiijo ahaan, dhammaan adeegsadayaashu waxay bilaabeen inay raadiyaan waxyaabo kale, sidaa darteed isbarbar dhiggan tan iyo markii labada barnaamij ee ugu meeleynta wanaagsan ay yihiin Signal iyo Telegram.
1 Signal vs Telegram keebaa dooranaya? Maxay ka siman yihiin?
1.1 Labada barnaamij keebaa ugu wanaagsan xagga asturnaanta?
1.2 Midkee ayaan ilaaliyaa?
Signal vs Telegram keebaa dooranaya? Maxay ka siman yihiin?
Si aad u bilowdo sameynta Signal vs Telegram waa wax aad u adag maxaa yeelay labaduba waa ikhtiyaarro wanaagsan, laakiin waa inaad isku daydaa inaad hesho waxay ka siman yihiin ka dibna mid dooro. Marka hore, faa iido weyn ayaa ah in midkoodna uusan ka tirsanayn Facebook, sidaas darteed, shirkad kasta oo weyn oo danaynaysa xogtayada gaarka ah. Dhab ahaantii eeg haddii ay sidaas tahay Signal waxaa iska leh shirkad aan macaash doon ahayn. Telegramku sidaas ma aha, haddii ay iska leedahay shirkad macaash doon ah laakiin ilaa maanta ma jirto fadeexad la og yahay oo ku saabsan asturnaanta, dhab ahaantii taasi waa xooggeeda.
Labada barnaamijba waxay leeyihiin dhammaan shaqooyinka aasaasiga ah ee aan filan karno, taas oo ah, dirista farriimaha, dirista dhejiska, soo dir sawirro, faylal, samee wicitaanno maqal iyo muuqaal ah iyo wax kasta oo aad hore u taqaannay illaa hadda. Intaa waxaa dheer, labaduba sidoo kale gabi ahaanba waa bilaash. Waxaad kaliya ku xiriirin doontaa lambarka taleefankaaga app -ka si aad awood ugu yeelatid inaad adeegsato marka laga soo dejiyo dukaanka. Waa kuwee jidka, labada barnaamij labaduba waxay ku jiraan dukaanka Apple iyo Google Play Store, sidoo kale waxaa loo heli karaa iPad iyo kiniiniyada sidoo kale leh qaababkooda desktop -ka ee Windows, Linux iyo MacOS.
Labada barnaamij keebaa ugu wanaagsan xagga asturnaanta?
Tani waa mid aad u fudud taasina waa sababta aan toos ugu aadi doonno barta. Haddii aan ka hadalno asturnaanta, Signal kasta isgaarsiin kasta oo aad ku sameysid abka wuxuu noqon doonaa mid dhammaad-ilaa-dhammaad lagu qariyo inta u dhexeysa aaladaha mobilada ama kiniinnada isticmaalaya barnaamijka. Sidaa darteed shirkadda leh Signal, taas oo ah, Signal Foundation, ma heli karto mid ka mid ah farriimahaaga xataa hadaan rabo. Way u fududdahay in Signalku uusan waxba garan karin. Hadda waxaan la soconnaa Telegram.
Telegram -ka waa wax ka duwan waxaadna u maleyneysaa inuu horeyba uga adkaaday dagaalka wixii aan hadda kaaga sheegnay Signal. Waana sidaas, in kasta oo ay ku dareyso xoogaa shaqooyin ah oo aan hadda kuu sheegi doonno. Codsiga sida oo kale Kuma siinayso sirta isgaarsiinta ee Signal leeyahay, laakiin waxay ku siinaysaa qaabkeeda "wada sheekaysiga qarsoodiga ah" taasi waxay u oggolaan doontaa dirista isticmaale kale farriimaha sirta ah ee dhammaadka-ilaa-dhammaadka ah ee u dhexeeya labada aaladood iyo iyagoon ku sii jirin daruuraha Telegram-ka. Taasi waa, waxay leedahay saldhigga Signal laakiin waxay khuseysaa oo keliya haddii aad rabto oo aad la furto sheeko cusub qofkaas.
Farriin kasta oo ka timaadda Telegram waxaa arki kara shirkadda iska leh sababta oo ah waxay dhex maraan server -keeda daruurta. Marka lagu daro tan Telegram kuma heli doontid ikhtiyaarka "koox qarsoodi ah" oo aan sidaas u jirin, waxaad kaliya awoodi doontaa inaad lahaato sirtaas buuxda ee u dhexeysa aaladaha leh wada sheekaysiga u dhexeeya laba qof, marnaba koox. Miyaad ilowday inaad ku darto ikhtiyaarkan? Xiiso badan
Sidaad u fikirayso, Signal -ka haa, kooxaha sidoo kale waa sir, sidaa darteed dhammaan wada sheekaysiga kooxdaadu had iyo jeer waa qarsoodi mana akhrin karaan shirkadda Signal Foundation. Dabcan, maskaxda ku hay in farriimaha lagu kaydin doono aaladdaada gacanta iyo tan saaxiibbadaada, macaamiishaada, qoyskaaga ama dadka aad la hadasho.
Mid kale oo ka mid ah raalli ahaanshaha Signal ee ku jira dagaalkan Signal vs Telegram ee asturnaanta ayaa ah in Signal uu yahay barnaamij il furan, labadaba koodhka macaamiishaada iyo koodhka ay ku isticmaalaan server -ka Signal -ka waa la arki karaa oo lagu isticmaali karaa GitHub. Sida iska cad iyo sida aad filayso, softiweerka server -ka Telegram ma aha il furan, in kasta oo appku laftiisu yahay. Taasina wax badan noo sheegi mayso, laakiin waa Qodob kale oo doorbidaya in Signalku qaato dagaalka. Oo waxaad mooddaa inuu dhibco helayo.
Midkee ayaan ilaaliyaa?
Marka la soo gaabiyo, Signal ma laha tafaasiil badan marka loo eego barnaamijka farriinta ee labada barnaamij ee kale ee suuqa ay sameeyaan, laakiin waa taas farqiga u dhexeeya Calaamadda marka loo eego Telegram iyo WhatsApp waa asturnaanta. Faahfaahin kasta oo ka mid ah Calaamadda ayaa halkaas mareysa waana barnaamij u uuraystay aasaas si loo ilaaliyo asturnaantayada. Ma aha inay leedahay kala duwanaansho badan xagga Telegram -ka, laakiin waxa kale oo halkaan ka dhacaya ayaa ah in Telegramku aad u weyn yahay oo dad badan ay adeegsadaan, sidaa darteed, waxaad heli doontaa qoys, saaxiibo, ama macaamiil isticmaala Telegram ama WhatsApp oo keliya oo aan ahayn Signal .
Waa wax shaqsi ah laakiin haddii wax kuu caddaadeen waa haddii aad raadineyso asturnaan, Signal waa app -kaaga. Halka haddii aad raadinayso wax ka yar asturnaanta, laakiin ka badan WhatsApp, iyo sidoo kale shaqooyinka farriinta caadiga ah iyo isticmaaleyaal badan, Telegram waa app -kaaga.
Waxaan rajaynaynaa in maqaalkani adiga ku anfaco oo wixii hadda ka dambeeya aad ku caddahay cidda ku guulaysata dagaalka Signal vs Telegram. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Telegram ama Signal waxaad ku dhaafi kartaa sanduuqa faallada. Oo sidaan mar walba kuu sheegno, ku arag maqaalka soo socda ee Madasha Mobile.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » telegraam » Signal vs Telegram: waa maxay kala duwanaanshaha jira?
10 beddel oo bilaash ah oo loogu talagalay Word for Mac